Somali / Waraaqda Soo-dhaweynta ee Kormeeraha Guud(Welcome Back)
Waraaqda Soo-dhaweynta ee Kormeeraha Guud
Gacaliyeyaal Bulshada Iskoolada Degmadda Cherry Creek,
Agoosto 17, waxaan ku soo dhaweyn doonaa ardayda fasalada –Barashada fasalka dhexdiisa iyo tan Khadka tooska ah ee internetka - oo dhan masaafo ah 108 mayl oo laba jibaaran, aad iyo aadna waan ugu farxasanahay.
Macalimiinteena dadaalka badan, shaqaalaha iyo maamulayaashaba waxey ka maqnaayeen ardayda ilaa iyo March 12keedii - taasi waa in kabadan 150 maalmood. Dhamaanteen waxaan dooranay shaqooyinka aan qabano sababtoo ah waxaan jecel nahay waxbarista - waxaan jecel nahay hagida ardayda, waxaana jecel nahay inaan aragno ardayda oo korta. In aan ka maqnaano ardaydeena modo dhan shan bilood waxay caqabad ku ahayd qof kasta oo ka mid ah xarumaheena waxbarashada. Runtii ma sugi karno inaan ku soo laabano waxbarashada oo aan la wadaagno ardaydeena.
Laakiin xitaa sida aan ugu faraxsanahay ku soo laabashada fasalada bilowga sanad dugsiyeedka 2020-21, waxaa muhiim ah in aan ilaalino amniga iyo caafimaadka bulshadeena . Bilihii la soo dhaafay, go'aan kasta oo aan qaadnay wuxuu ku salaysnaa amniga ardayda, qoysaska iyo shaqaalaheena markii aan wajaheyno aafada cudurkan. Taasi isma badalin marna.
Degmadu waxay qaadaysaa talaabooyin aan caadi ahayn oo ka sarreeya tilmaamaha caafimaadka bulshada si loogu dadaalo xaaladaha nabadgelyo ee dhamaan iskooladeena. Istaraatiijiyadeenna waxay ku saleysan tahay xogta ugu dambeysa iyo sayniska - habkaasi wuxuu aasaaska u yahay nidaamka cabirka ku saleysan xogta ee aan u sameeyay si aan ugu hagno go'aanadeena ku saabsan hadii la qaban doono barashada fasalka dhexdiisa ama barashada fog ee internetka. Wixii intaa sii dheer, waxaan u hirgelinay baaritaanka COVIDka oo bilaash ah dhamaan shaqaalaha CCSD, taas oo muhiim u ah in lagula socdo xaaladda dhismayaasheena. In kasta oo baaritaankaas usan ahayn mid qasab ah, waxaan ku dhiirigelinaynaa dhamaan shaqaalaha inay ka faa'iideystaan ​​adeegan si ay uga caawiyaan ogaanshaha kiisaska la is qaadsiin karo ee fayraskan.
In kasta oo dhamaan talaabooyinkan ay muhiim yihiin, kaligeen lama dagalami karno fayraskan. Waxaa muhiim ah in aan wada shaqeyno si aan u hubinno inaan sida ugu nabdoon ee suurtogalka ah isu ilaalino. Anaga oo isu diyaarinayna inaan furno dugsiyada, waxaan ka codsanayaa xubin kasta oo ka mid ah bulshada CCSD inay qaybtooda ka qaataan. Bulshooyinka aaminka ah waxay keeni karaan iskoolo aamin ah. Fadlan ka caawi ardaydaada inay ka fogaadaan inay la kulmaan kooxo badan oo saaxiibo ah oo isticmaalaan nidaamka kala fogaanshaha bulshada ee ku haboon. Hubso inay xirtaan maaskaro ama afka dabooshaan markasta oo munaasib ah, iyada oo la raacayo waajibaadka gobolka. Ka taxaddar caafimaadka ardaydaada; Hubso inaysan imaanin dugsiga haddii ay xannuunsan yihiin ama aysan muujin wax astaamo ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa muhiim ah in aan dhamaanteen diyaar u noqono is-bedellada suurtagalka ah. Diyaar u ahaanshaha Wax-barashada fasalka dhexdiisa ah macnaheedu waa u diyaarsanaanta hadii loo baahdo xidhitaanka fasalka ama iskool hadii xaaladdu noqoto mid aan aamin ahayn xaga caafimaadka. Waxay ka dhigan tahay u diyaarsanaanta u guurista mar labaad barashada internetka ee guriga hadii xogtu muujiso in fayrasku uu kor u sii kacayo bulshada dhexdeeda. Waxaa naga go’an inaan sida ugu dhaqsaha badan idiin ku soo wargalino waxii soo kordha. Waalidiinta waa la ogeysiin doonaa hadii ardayga ama xubin ka mid ah shaqaalaha iskoolka ama iskoolkiisa uu leeyahay kiis la xaqiijiyay oo ah COVIDka, iyo wixii tilmaamo ama talooyin ahna waa loo sheegi doonaa. Markii la cadeeyo kiis la xaqiijiyay, waxaan la shaqeyn doonaa -hawlgalayaasha caafimaadka dadweynaha si aan ula xiriirno raadinta iyo go'aaminta talaabada ay lagama maarmaanka u tahay, taasoo macnaheedu noqon karto in laga codsado fasalka ardaydaas inaysan imaanin dugsiga mudo waqti ah iyo in lala socdo astaamaha. Hadii ay jiraan kiisas badan ama arday badan oo leh astaamo dheeri ah talaabo ayaa laga qaadi karaa, sida in la karantiilo -kooxdaas, heer fasal ama heer dugsi waqti cayiman. Waad ka aqrin kartaa halkan CDPHE timaan ku saabsan sida loo maareeyo kiisaska la xaqiijiyay oo la sii daayay August 12, 2020. Waxaad ka arki kartaa timaamaha khariidada ee CDPHE ee ku saabsan inta ardagu ama xubin shaqaale ah uu u baahan yahay inuu guriga joogo ka dib kiis la xaqiijiyay halkan, iyo aaladda CDPHE oo loogu talagalay go'aaminta tilaabooyinka xiga ee fasalka ama kooxda marka ay jirto kiis la xaqiijiyay halkan. Waan raaci doonaa tilmaamahaan, sida tilmaamaha kale oo dhan ee ka yimaada Gobolka. Mar labaad, waa mid muhiim u ah fasalka oo dhan inaad guriga ku haysid ardaygaaga hadii lagu arko astaamaha lagu xusay dukumiintigan.
Waxaan ku mashquulsaneyn xagaaga-summerkii si taxaddar leh qorsheynta dhamaan wixii natiijooyin ee suurtagalka ah. Todobaadkan, waxaan sii deynnay a fiidiyowyo taxane ah oo loogu talagalay inay ka caawiso waalidiinta inay u diyaar garoobaan ku laabashada dugsiyada. Fiidiyowyadan, oo ay la socdaan xogtii ugu dambeysay ee COVID oo ka socota Degmada Arapahoe iyo ilo kale oo waxtar leh, waxaa laga heli karaa websaydka. Waxa kale oo aad ka heli kartaa fiidiyowyadan iyo wargalin kale oo ku caawin karta dhamaan khadadka warbaahinta bulshada.
Kahor intaanan bilaabin sannad dugsiyeedka 2020-21, waxaan rabaa inaan si toos ah ugu mahadnaqo kumanaanka macalimiinta iyo shaqaalaha dugsiga kuwaas oo naftooda u huray inay ilaashadaan hidaha wanaagsan ee CCSD inta lagu jiray musiibada aduunka. waxaad dadaal wayn galiseen u diyaarinta fasalada iyo dhismayaasha ardayda si loogu laabto dugsiyada. Waxaad qaadateen door cusub, waxaad barateen borotokool cusub xaga amniga caafimaadka iyo isticmaalka aalada wax lagu baro ardayda ee internetka ah. Waad ku mahadsan tihiin shaqadaada adag iyo dadaalkiina, waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaweyno ardaydeena , ha noqoto fasalka dhexdiisa ama Onlineka. Waad ku mahadsan tihiin waxkasta oo aad sameyseen. Runtii waxaad tihiin geesiyaashii masiibadan COVIDka.
Shakhsi ahaan, waxaa maalin walba i dhiirrigeliya oo dib ii xaqiijiya dadaalada weyn ee hagar la’aanta ah ee ay sameeyeen dhamaan degmo Dugsiyeedka Degmadda bulshada cherry Creek. Dhamaantiin waxaad ku dadaasheen sidii aad u hubin lahaydeen in kasta oo caqabadaha hada jira ee xanuunkan, sanadka soo socdaa uu u noqon lahaa mid u fiican ardaydeena. Waxay u muuqan doontaa mid ka duwan sidii hore, laakiin waad mahadsan tihiin dhamaantiin, kan wuxuu noqon doontaa sanad dugsiyeed cajiib ah, mid ay ka buuxo barashado, koritaanka ardayda iyo isbedelka.
Aan lahaano sanad wanaagsan.
Scott Siegfried, Maamulaha guud